Mpitondra Rano (fanandroana)
Batisa alentika anaty rano
Mpitondra Rano (antokon-kintana)
Tandrok Osy (fanandroana)
Boky voalohanny Makabeo
Boky voalohanny Mpanjaka
Boky faharoanny Mpanjaka
Boky faharoani Samoela
Bokinny mpaminany (Baiboly)
Boky faharoanny Makabeo
Boky voalohani Samoela
Tantaran i Gabôna
Sinoda momba ny tanora
Fianarana ny fanatontoloana
Kanônan ny Baiboly
Pseodepigrafa (Testamenta Vaovao)
Fiadiana ny tompondaka eran-tany ho an’ny kitra 2014
Rafitra fitantanana banky angona
Arthur Conan Doyle dia Dokotera, mpanoratra, Poeta, mpanao asa soratra, mpanoratra tantara lava, mpanao politika, mpanoratra fanoharana, mpanoratra tantara tsangana, mpanoratra ny tantaranny fiainany mizaka ny zom-pireneni Fanjakana Mitambatra te ...
Ny lakandranoni Panamá dia lakandrano namboarinny olombelona, mampita ny andilan-tanini Panamá any Amerika Afovoany. Ny lakandranoni Panamá dia lakandrano namboarina eo anelanelanny Ranomasimbe Pasifika sy ny Ranomasimbe Atlantika, ao Panamá no m ...
Fihetsiketsehana karismatika vaovao
Ny fihetsiketsehana karismatika vaovao dia firehanny kristianisma ara-pilazantsara izay manandratra avo ny fanomezanny Fanahy Masina. Nanomboka tao Etazonia taminny fanombohanireo taona 1980 izany fihetsiketsehana izany. Maro ireo fiangonana nifo ...
Fihetsiketsehana karismatika evanjelika
Ny fihetsietsehana karIsmatika evanjelika na fihetsiketsehana karismatika ara-pilazantsara dia firehanny kristianisma evanjelika izay manandratra avo ireo fanomezanny Fanahy Masina. Nanomboka tao Etazonia taminny taona 1960 izy io ka nisy akony t ...
Ny Kristianisma karismatika na Fihetsiketsehana karismatika dia endriky ny kristianisma sy vondronny fifohazam-panahy nanandratra avo ny asanny Fanahy Masina sy ny fanomezam-pahasoavanny Fanahy Masina ary ny fahagagana araka izay hita indrindra a ...
Ny Fiangonana kongregasionalista dia fiangonana protestanta manaraka ny fombanny Fiangonana nohavaozina izay mampihatra ny fomba fandaminam-piangonana atao hoe kongregasionalisma ka ny paroasy tsirairay dia mizaka tena. Araka ny tatitra nataonny ...
Ny Evanjelisma na Evanjelikalisma na Fiangonana ara - pilazantsara dia fihetsiketsehana kristiana milaza fa ny Filazantsara no hany fototra sy filamatry ny finoany. Niforona nanomboka taminny Fanavaozam-piangonana protestanta io fihetsiketsehana ...
Fivavahana ao aminny Repoblika Demôkratikani Kôngô
Ny fivavahana ao amin ny Repoblika Demôkratikan i Kôngô dia anjakan ny kristianisma izay arahin ny ankamaron ny mponina. Ao aorian izany ny fivavahan-drazana sy ny fivavahana silamo. Hita ao koa ny fivavahana hafa toy ny jodaisma sy ny hindoisma ...
Ny Pentekôtisma, izay atao hoe koa Fihetsiketsehanny Pentekôsta, dia fireham-pinoana kristiana ara-pilazantsara vokatry ny Fifohazam-panahy notarihinny pastora amerikana Charles Fox Parham sy William Joseph Seymour tao Etazonia taminny taona 1906 ...
1803: Vasili Samarsky-Bykhovets - injeniera Albert Camus 1907: Vladimir Korolkov - injeniera 1879: Léon Trotski - mpanao politika, mpanoratra ny tantaranny fiainany, filôzôfy 1886: Reinhold Schünzel - mpilalao, talen-koronantsary, mpanoratra sena ...
0599: Ali ibn Abi Talib - 0763: Harun al-Rashid - Benoît Marie Moline de Saint-Yon - injeniera 1780 August Leopold Crelle Innocent Manzetti - mpahay siansa, mpamorona 1789: Edmund Kean - mpilalao Federico de Comelli von Stuckenfeld 1818: Frederic ...
Ny varahina dia karazana metaly sady singa simika manana laharana atômika 29 sy eva Cu. Misy varahina voajanahary, izay ilain ny fahaveloman ny zavamanana aina, ny sosona ambony amin ny tany, Ampiasain ny olombelona amin ny endrika metaly ny vara ...
Ny volafotsy dia singa simika mitondra ny laharana atômika 47 sy aseho amin ny eva Ag. Metaly tetezamita malefaka, fotsy, mamirapiratra, manana toetra mampita aratra ambony indrindra, ny fitarihana hafanana ary ny fitaratry ny metaly rehetra.
Ny lefona dia fitaovam-piadiana fanipy misy lelany fisaka maranitra sy matsilo vita amin ny metaly sy misy tahony vita amin ny hazo.
Ny asterôida dia planeta bitika izay fifangaroana vato sy metaly ary rano mandry ka ny habeny dia miova eo anelanelanny iray metatra ny anjatony kilometatra.
Ny fanitso dia singa ara-tsimia, metaly, mitondra ny laharana atômika 30 amin ny firaketan i Mendeleiev sy eva Zn.
Ny basy dia fitaovam-piadiana ampiasaina hitifirana amin ny bala atosiky ny vanja. Ny tenan ny basy dia matetika vita amin ny hazo, fa metaly kosa ny fantsona fivoahan ny bala.
Ny Andronny Varahina dia vanimpotoana ao aminny Neolitika izay nahafahezanny olombelona ny fanefena varahina, talohanny fanefena alimo. Nandritra ny ampahany be aminny Neolitika dia niara-nisy aminny taozavatra aminny vato sy ny taolana ny fanefe ...
Ny viraty na alominiôma dia zavatra simika manana eva Al sy manana isa atômika 13. Ny viraty dia zava-dehibe eto an-Tany satria viraty ny 1.5 %n ny lanja tontaliny. Ny viraty dia metaly mangirangirana ary malemy. Fantatra amin izy sarotra harafes ...
Ny antsy dia fitaovana marani-dela vita amin ny metaly, ahafaha-manapaka na mandidy, misy tahony vita amin ny hazo na amin ny plastika na amin ny metaly.
Ny firamainty dia singa ara-tsimia mitondra ny laharana atômika 82 araka ny firaketan i Mendeleiev, sy ny eva Pb. Metaly mora volavolaina ny firamainty, izay miloko volombatolalaka manopy manga, izay mihafotsy moramora rehefa mitombo ny ôksizenin ...
Fitrandrahana harena an-kibonny tany eto Madagasikara
Ny fitrandrahana harena an - kibonny tany eto Madagasikara dia kely sady miangona manodidina toerana lavitra ahitana tahirinakora voajanahary betsaka. Ahitana otrikakora mineraly misimisy ihany ny eo aminny mineraly indostrialy sy momba ny metaly ...
Krzysztof Kieślowski dia talen-koronantsary, mpanoratra senariô mizaka ny zom-pireneni Polonia teraka ny 27 Jiona 1941 tao Varsôvia ary maty ny 13 Martsa 1996 tao Varsôvia
Wanda Jakubowska dia talen-koronantsary mizaka ny zom-pireneni Polonia teraka ny 10 Oktobra 1907 tao Varsôvia ary maty ny 25 Febroary 1998 tao Varsôvia
Kazimierz Prószyński dia mpamorona, talen-koronantsary mizaka ny zom-pireneni Polonia teraka ny 4 Aprily 1875 tao Varsôvia ary maty ny 13 Martsa 1945
Antoni Grabowski dia injeniera, mpanao asa soratra, Poeta, mpanoratra mizaka ny zom-pireneni Polonia teraka ny 15 Jiona 1857 ary maty ny 4 Jolay 1921 tao Varsôvia
Ny olombelona dia karazana biby hominide mandeha aminny tongotra roa. Ny olombelona dia malaza aminny fahakinganny sainy, ny fomba amam-panaony, ny fiteniny, ary ny fandrindrany ny tontolo iainany. Ny olombelon dia zavaboary miavaka aminny rehetr ...
Ny teny hoe serafima dia avy aminny teny hebreo hoe שְׂרָפִים / serafim izay endrika milaza maronny teny hoe שָׂרָף / śārāf izay avy aminny matoanteny hebreo hoe saraf izay midika hoe "mirehitra" na "mandoro". Io teny hebreo serafim io dia midika ...
Famoronana (araka ny Baiboly)
Ny Famoronana dia ilay asan Andriamanitra tamin ny alalan ny teniny nampisy izao rehetra izao tany am-boalohany. Tantara miendrika angano ao amin ny bokim-pivavahan ny Jodaisma sy ny Kristianisma izany, dia ny Bokin ny Genesisy. Ny Bokin ny Genes ...
Ny paradisa dia toeranam-pahasambarana ahitana ny fahamaroanny zavatra tsara tsy mety lany sady lavitra ny fijaliana ka handraisana ireo olona tsy nivadika aminny finoany. Ao aminireo fivavahana abrahamika dia ny saha Edena no paradisa nametrahan ...
Ny jiny dia zavaboary ara-pinoana teo aminny Arabo tany aloha ary mbola inoana fisiana ao aminny fivavahana silamo ankehitriny. Tsy hita maso ny jiny aminny ankapobeny nefa tsy fanahy tanteraka satria afaka miseho aminny endrika zavamaniry na bib ...
Ny tôtemisma dia finoana ny fisian ny razana na fanahy izay mitoetra ao amin ny atao hoe tôtema. Lamin-kevitra sy famantarana ary fanao miorina amin ny fifandraisan ny olona na ny vondron olona sy ny zavatra eny amin ny zavaboary ny tôtemisma.
Ny finoanoam-poana dia finona tsy araka ny lalàn ny saina izay miorina amin ny tahotra na ny tsy fahalalana izay iheverana ho manana toetra mihoatra ny an ny zavaboary na toetra masina ny zava-mitranga na ny fihetsika na ny fitenenana sasany. Tam ...
Ny fanambaràna dia fahalalana azo mivantana amin Andriamanitra ka mety ho amin ny alalanny fisehoan Andriamanitra izany na ny fahenoana ny teny mivoaka avy ao aminy na ny tsindrimandry azonny mpaminany na ny fanomezany lahateny efa voasoratra rah ...
Ny fizaràn-taona dia fari-potoana ao anatin ny taona izay ahatsapana tsy fiovana firy eo amin ny toetrandro izay mifandray amin ny tsingerim-piainan ny zavaboary. Ampifadraisin ny olona amin ny asa fivelomany koa ny fizaran-taona, indrindra ny fa ...
Origenesy avy any Aleksandria
I Origenesy avy any Aleksandria dia teolojiana kristiana taminny Andro Taloha. Atao hoe Adamantiosy koa izy. Tao Aleksandria taminny taona 185 no nahaterahany. Notezaina taminny fivavahana kristiana izy. Saika maty matira izy taminny hafanam-pony ...
Ny fanekem-pihavanana dia fanekena ifanaovanAndriamanitra sy ny vahoakany na aminny olombelona rehetra. Ao aminireo fivavahana abrahamika no tena ahitana izany, ka iresahana indrindra ny fanekem-pihavanana tamini Abrahama. Aminny teny hebreo dia ...
Famoronana (finoana sy fedrà)
Ny famoronana na fahariana dia fedràm-piandohana itantarana ny fiandohan izao rehetra izao: ny olombelona, ny tany, ny aina ary izao tontolo izao. Na dia misy zavatra itovizany ny fedrà sasany momba ny famoronana na ny fiandohana dia betsaka ny a ...
Ny metatra aminizao fotoana izao dia ny halavirana vitanny voankazavana andehanana ao anatinny 1/299 792 458 segondra. Aminny rafitra iraisam-pirenena dia io no refy ampiasaina rehefa mandrefy halavirana na habe.
Ombilahy kely volamena
Ny ombilahy kely volamena dia ombilahy kely namboarina taminny volamena ka nivavahanny Hebreo tany an-tany efitra rehefa tsy teo fa niakatra tany an-tendrombohitra Sinay i Mosesy naka ny vato fisaky ny Lalàna. Ao aminny Baiboly dia tandindonny fa ...
Ny firapotsy dia singa ara-tsimia mitondra ny laharana 50 araka ny firaketan i Mendeleiev, sy ny eva Sn. Mitsonika ny firapotsy rehefa mahatratra 232° C ny fahanany, ary mangotraka rehefa mahatratra 2 260° C. Manana hakitroka 7.28 izy.
Amar Sonar Bangla dia hira ny 1906 aminny mpamoron-kira, sy ny mpamoron-kira Rabindranath Tagore. Ny voalohany 10 andininy niorina taminny taona 1972 tahaka ny hiram-pirenena ao Bangladesh. Ny teny sonar midika ara-bakiteny hoe nanao ny volamena, ...
Defia Rosmaniar dia atleta iray mizaka ny zom-pirenena Indôneziana. tsara ny anarany rehefa nandrombaka medaly volamena voalohany ho ani Indônezia taminny Lalao Aziatika 2018.
Ny Fiaranny fanekena dia ilay vata nitahirizana ny Didy folo nomena an i Mosesy teo amin ny tendrombohitra Sinay, araka ny voalaza ao amin ny Baiboly. Amin ny teny hebreo dia atao hoe אֲרוֹן הָעֵדוּת / Aron haEdout izay midika hoe "fiaran ny fijo ...
I Hubal no andriamanitra lehibe indrindra sady rain ireo andriamani-bavy telo nivavahan ny Arabo talohan ny fivavahana silamo. Ireo andriamanibavy ireo dia i Al-Lāt sy i Al-‘Uzzá ary i Manāt. Ny sarivongan i Hubal izay vita tamin ny agata mena sa ...
I Luzón na Luzon dia nosy ao aminny tapany avaratri Filipina izay faritanny helodranoni Babuyan ao avatratra, ny ranomasini Filipina ao atsinanana, ny helodranoni San Bernardino ao atsimo ary ny ranomasini Sina atsimo ao andrefana. Izy no nosy le ...
Ny volavelona dia singa ara-tsimia mitondra ny laharana atômika 80 sy ny eva Hg. Metaly miranoka somary marihitra ny volavelona rehefa feno ny fepetra manara-penitry ny maripana sy ny tsindry. Ampiasaina amin ny fanamboarana tondrofana sy amin ny ...
Ny Tempolini Jerosalema, araka ny Baiboly, dia toeram-pivavahana naorinny Israelita tao Jerosalema mba hampitoerana ny Fiaranny fanekena. Noravanny tafiki Babilona izy ary natsangana indray teo ambany fitarihani Ezra fitopolo taona taty aoriana a ...
Magy ao aminny Baiboly
Ny magy na majy dia ilazanny Filazantsara araka ani Matio ireo mpivahiny izay notarihinny kintana iray avy any atsinanana ho any Israely mba hitsaoka ny Kristy vao teraka.
Ny Andronny Alimo dia vanimpotoana tany alohanny fotoana nandraiketana voalohany ny tantara, izay miavaka noho ny lanjanny fanefena alimo. Izany vanimpotoana izany dia mahatratra 2 000 taona eo ho eo, manomboka aminny taona 3000 hatraminny 2000 t ...
Fiadiana ny tompondaka eran-tany ho a ..